UPDATE: Iiraan oo qiratay kana hadashay qaabkii ay u soo riday diyaaradii rakaabka ee Ukrainian
Burburka diyaaradii ay ku qaldantay Iiraan oo ay soo riday /Photo Credit: EPA
Tehran (Halqaran.com) – Militariga dalka Iraan ayaa sheegeen in si aan ula kac ahayn oo kama ah ay u soo rideen diyaarad rakaab oo laga lahaa Ukrainian, sida uu baahiyay telefishinka qaranka Iiraan.
Bayaan la baahiyay saaka ayaa lagu sheegay in falkani uu ku dhacay oo burburka diyaarada uu ka dhashay”khalad uu bina’aadam sameeyay “.
Iran ayaa horey u diiday warar sheegayay in diyaaradda ay soo dhacday kadib markii uu haleelay gantaal ay Iiraan riday.
Diyaaradda oo laga lahaa Ukraine ayaa waxay burburtay Arbacadii waxaana ku dhintay dhamaan rakaabkii saarnaa oo dhanaa 176.
Dalalka Mareykanka, Canada iyo Ingiriiska ayaa sheegay horey u sheegay in diyaarada ku dhacday Iran uu ku dhacay gantaal ay rideen ciidanka dalkaas.
Caddeymo ay heleen dalalkaas ayaa muujineyay in gantaal ay riday Dowladda Iran uu soo riday diyaaraddii Ukarine ee ay saarnaayeen dadka rayidka ah, taas oo ku dhacday duleedka caasimadda Tehran.
Tags: Iiran oo qiratay inay soo riday diyaaradii rakaabka ee Ukrainian
Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka Galmudug oo maanta lagu wado in la dhaariyo